फिल्म खेल्दै विपिन र स्वस्तिमा ? | Chitrawan Online
रत्ननगर जेसिजको जेसिज सप्ताह : आज गुरु सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
पछील्लो २४ घण्टामा २९३ जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको संख्या १५७८४ पुग्यो
रत्ननगर जेसीजद्धारा सप्ताह व्यापी कार्यक्रम घोषणा : समाज केन्द्रित कार्यक्रममा जोड दिइने
रत्ननगर जेसिजले गर्यो बृक्षारोपण : एक घर २ बिरुवा अभियान थप सशक्त पारिने
थप ७४० मा कोरोना सं‌क्रमण : संक्रमितको स‌ंख्या १५ हजार २५९ पुग्यो
एकैदिन भरतपुरमा ६ जनामा कोरोना : चितवनमा संक्रमितको संख्या ८२ नाघ्यो
थप ४७३ जनामा कोरोना सं‌क्रमण, संक्रमितको स‌ंख्या १४ हजार ५१९ पुग्यो
Home मनोरञ्जन फिल्म खेल्दै विपिन र स्वस्तिमा ?
फिल्म खेल्दै विपिन र स्वस्तिमा ?
on: १४ श्रावण २०७६, मंगलवार १०:५३ In: मनोरञ्जन, मुख्य खबर
वि.सं २०७५ सालको ‘राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार’बाट नायक विपिन कार्की र नायिका स्वस्तिमा खड्का पुरस्कृत भए । विपिनले चलचित्र ‘प्रसाद’बाट अवार्ड पाएका थिए भने स्वस्तिमाले ‘बुलबुल’बाट अवार्ड आफ्नो पोल्टामा पारेकी थिइन् ।
दुबैले राम्रो अभिनय गरेकै कारण अवार्ड प्राप्त गरेका थिए । दर्शकले यी दुई कलाकारलाई एकसाथ पर्दामा पनि हेर्न चाहेका छन् ।
नायक विपिन कार्कीले पनि आफूलाई स्वस्तिमासँग काम गर्न मन लागेको सुनाएका छन् । उनले अनलाइनखबरसँग भने–‘स्वस्तिमासँग काम गर्ने मन भयो भनेर अरुसँग काम नै गर्न मन लागेन भनेको होइनँ । तर, पछिल्लो समय स्वस्तिमाले निकै राम्रो काम गरिरहेकी छिन् । त्यसैले उनीसँग काम गर्न मन लागेको हो ।’
नम्रता श्रेष्ठ, वर्षा राउत लगायतका नायिकासँग काम गरिसकेका विपिनले स्वस्तिमालाई पर्दामा जोडी बनाउने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । यसैविच, विपिन र स्वस्तिमाले एकसाथ चलचित्रमा काम गर्न लागेको वुझिएको छ । वुझिएअनुसार, निर्देशक दिनेश राउतको निर्माणमा बन्न लागेको एक चलचित्रमा विपिन र स्वस्तिमाले काम गर्न लागेका हुन् । अहिले चलचित्रको कथामा धमाधम काम भैरहेको छ । तर, यस बिषयमा चलचित्रको निर्माण टिमले केही पनि खुलाएको छैन ।
गोलाघाट एक परिचय
‘केजीएफ २’ मा सञ्जयको डरलाग्दो लुक्स
२४ असार २०७७, बुधबार २०:४०
२३ असार २०७७, मंगलवार १६:०५
२२ असार २०७७, सोमबार २०:०३
२१ असार २०७७, आईतवार २०:३८